ငါတို့ ဝန်ဆောင်မှု - ဂျင်ချိ UNITE ကို ပုံ စက်မှု ကုမ္ပဏီလီမိတက်
နေအိမ် > စွမ်းဆောင်နိုင်မှု > ငါတို့ ဝန်ဆောင်မှု
စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး stageâ† 'ကျနော်တို့ 3D နှင့် 2D တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပုံဆွဲလိုအပ်မှိုစံချိန်စံညွှန်းများ, မှိုလိုင်, နှင့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းကိုးကားရန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းပစ္စည်း။
စီမံကိန်းအသစ်သည်စင်ပေါ်စတင်သည်â ''ဖောက်သည်ထံမှ PO နှင့်နောက်ဆုံးပုံဆွဲ (2D နှင့် 3D) ။ ထိုအခါကျွန်ုပ်တို့၏အင်ဂျင်နီယာ DFM ပေး နောက်ဆုံးပေါ်ဆွဲအပေါ်အခြေခံသည်။ ငါတို့သည်မှနှစ်ဆဖို့ဖောက်သည်ငါတို့မှိုပုံဆွဲ ဖောက်သည်များနှင့် DFM အပေါ်ဆက်သွယ်မှုတိုတောင်းပြီးနောက်ပြန်လည်သုံးသပ်။
မှိုချမှတ်ခြင်းစဉ်အတွင်းâ ''ဖောက်သည်ပြီးနောက်မှိုပုံဆွဲလွှတ်ပြီးနောက်, ငါတို့လုပ်စတင်ပါ မှို။ မှိုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အပတ်စဉ်မှိုတင်ပို့သည့်အစီရင်ခံစာကိုတင်ပြသည် ဖောက်သည်လည်းနိုင်အောင်အပတ်တိုင်းဖောက်သည်မှပုံများအပြောင်းအလဲနဲ့ပုံသွင်း မှိုပြီးဆုံးသည်အထိမှိုအပြောင်းအလဲနဲ့စောင့်ကြည့်။
တင်ပို့မှိုများအတွက် 1. ကျနော်တို့လိမ့်မည် ဖောက်သည်ဖောက်သည်မှိုအတည်ပြုပြီးနောက်မှိုထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ပြproblemနာမရှိသေချာပါစေ ကျနော်တို့မှိုမကယ်နှုတ်မီဖြန့်ဝေ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံမှန်ထုတ်လုပ်မှုမှိုသည် 2. စက်ရုံ, ငါတို့ထုတ်လုပ်ပြီးနောက်အမှိုကိုထိန်းသိမ်းရန်ပါလိမ့်မယ်။
ပလတ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများထုတ်လုပ်မှုအတွက်3အင်ဂျင်နီယာသည်အတည်ပြုချက်နမူနာနှင့်ပုံပေါ် မူတည်၍ အစိတ်အပိုင်းအတိုင်းအတာကိုစစ်ဆေးပါမည် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်မှုမပြုမီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များအပေါ် အခြေခံ၍ အစိတ်အပိုင်းများကိုထုပ်ပိုးပါသည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်မဆိုလိုအပ်ချက်မရှိပါ, ငါတို့အပေါ်အခြေခံပြီးထုပ်ပိုးကိုကိုင်တွယ်ပါလိမ့်မယ် အစိတ်အပိုင်းများ၏အရည်အသွေး။
အရောင်းဇာတ်စင်ပြီးနောက်â '', အစိတ်အပိုင်းများအတွက်မဆိုပြifနာရှိပါကသို့မဟုတ် ဖောက်သည်ထံမှမှို, ငါတို့ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှာဖောက်သည်နှင့်အတူပြtheနာကိုသက်သေပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမှားဆိုရင်ငါတို့ကတာဝန်ယူမှာပါ။ ဒါကငါတို့အမှားမဟုတ်ဘူးဆိုရင်၊ ပြcustomerနာကိုဖြေရှင်းရန်ဖောက်သည်များကိုလည်းကူညီလိမ့်မည်။
> ၂ နှစ်
> ၅ နှစ်
> ၁၀ နှစ်
> ၆ နှစ်
> ၁၅ နှစ်
ကျွန်ုပ်တို့ကုမ္ပဏီတွင်ပြည့်စုံစွာရှိသည် ဒီဇိုင်းနှင့်စီမံကိန်းထိန်းချုပ်မှုများအတွက်ပုဂ္ဂိုလ်များ။ လက်ရှိတွင်ဒီဇိုင်နာ ၁၃ ယောက်ရှိသည် စီမံကိန်းစီမံခန့်ခွဲရေး ၀ န်ထမ်း ၃ ယောက်။ တိကျတဲ့ configuration ကိုအတွက်ပြသနေသည် အောက်ပါဇယား
မှို Flow အားသုံးသပ်ခြင်း
ကိစ္စများစွာတွင်ဆိုးရွားသောအခက်အခဲများရှိသည် မှိုဒီဇိုင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်ဆိုလိုသည်မှာ, မှိုဒီဇိုင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့ပါပြီ ပြီးစီးသော်လည်းထုတ်လုပ်မှုတွင်ပြproblemsနာများစွာရှိသည်။ မှိုစေရန်အလို့ငှာ ပိုမိုဆင်ခြင်တုံတရားနှင့်အညီဒီဇိုင်းပြုလုပ်ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ဖောက်သည်များအားမှိုစီးဆင်းမှုကိုလုပ်ဆောင်ရန်ကူညီပေးသည် မှိုဒီဇိုင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်မျက်စိကွယ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း။ The အောက်ပါကျွန်တော်တို့ရဲ့မှိုစီးဆင်းမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ၏ရုပ်ပုံဖြစ်ပါတယ်။
မှိုဒီဇိုင်း - 2D
အတိတ်ကာလ, တစ် ဦး ၏အစအ ဦး မှာ ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီ 2D ပုံစံများကိုဒီဇိုင်းပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ The အောက်ပါပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ 2D အင်ဂျင်နီယာပုံဆွဲခြင်း၏ပုံဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
မှိုဒီဇိုင်း - 3D
3dsoftware ကို function ကိုအတူ ပိုမိုအားကောင်းလာသည်နှင့်အမျှမည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမဆို 3D အပြည့်ဖြင့်တိုက်ရိုက်ကြည့်နိုင်သည် မော်ဒယ်။ ဤသည်ဖောက်သည်အတွက်စာရင်းစစ်ရန်အလွန်ကြီးစွာသောအဆင်ပြေပါတယ် မော်ဒယ်။ လည်းငါတို့အဘို့အဆင်ပြေ ဖောက်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပါ။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 3d Model ၏ပုံကိုဖော်ပြထားသည် ငါတို့။